Thursday, 07 March 2019 16:51
ပြည်နယ်အစိုးရထောက်ခံချက်နဲ့ MIC ခွင့်ပြုခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ်ထဲက ရွှေကုက္ကိုအိမ်ရာစီမံကိန်း
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီခရိုင်ထဲက နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေဖြစ်တဲ့ ရွှေကုက္ကိုမှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီက ကန့်ကွက်ရန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့ တင်ပြတာကို
Tuesday, 05 March 2019 16:40
တရုတ်(CCCC)ကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမြေဧရိယာအားလုံးကိုရရှိမည်ဟု သုံးသပ်မှုမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း NYDC ပြန်လည်ရှင်းလင်း
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းအတွက် Pre-Project Document (PPD) ရေးဆွဲရန် ရွေးချယ်ခံရသည့် China Communications Construction (CCCC) ကုမ္ပဏီသည် မြေဧရိယာအားလုံးကိုရရှိမည်ဟု ပြောဆိုသုံးသပ်နေခြင်းမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (NYDC) CEO ဦးသိမ်းဝေက ၎င်း၏ အပတ်စဉ်စာစဉ် (၂၂) မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Wednesday, 27 February 2019 13:44
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘယ်လို စီမံကိန်းသစ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်နေတာလဲ???
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဧက ၂,၇၀၀ ကျယ်ဝန်းသည့် မြောက်ဦး မြို့သစ်စီမံကိန်းနှင့် ဧက ၂၆,၀၀၀ ကျော်ရှိ မာန်အောင် ကျွန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းတို့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စတင်နေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည်။
Monday, 25 February 2019 14:12
လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည့် ဘက်စုံအိမ်ရာစီမံကိန်း
ဘက်စုံအိမ်ရာစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hilton Times City Yangon ကို လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဘယ်မြို့နယ်မှာ ဖော်ဆောင်နေတာလဲ???
အေဒီလမ်းဆုံနှင့် ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းအပါအ၀င် ဧရိယာငါးခုတွင် ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုဖြေလျှော့ရန် ဂျပန်အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA)ချေးငွေ ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟု ရန် ကုန်တိုင်းစည်ပင်သာယာရေးဝန် ကြီးဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
Wednesday, 20 February 2019 16:15
လူထုဗဟိုပြု အခြေခံ အဆောက်အဦး ၁၈၄ ခုကို မင်းတုန်းမြို့မှာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် မင်းတုန်းမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာများ၌ လူထုဗဟိုပြု အခြေခံအဆောက်အဦး လုပ်ငန်း ၁၈၄ ခုကို ငွေကျပ်သန်း ၁၈၁ဝ အသုံးပြု၍ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။
Tuesday, 19 February 2019 16:20
မြို့ငယ်တစ်ခုကို မန္တလေးမြို့အနီး မြေဧက ၅၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် တည်ထောင်မည်
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ် ရေတံခွန်တောင်အနီးတွင် တည် ရှိသော မြေဧက ၅၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လူနေအိမ်များ၊ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံ၊ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်များ၊ ကစားကွင်းနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများပါဝင်သော မြို့ငယ်တစ်ခုကို တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေတံခွန်တောင်စီးတီး မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှ သိရသည်။
မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခု ကျောက်ဖြူတွင် ဖော်ဆောင်မည်
ရခိုင် ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။